Practice Love for emakhishini: incazelo kanye izici
Okwamanje, ukusetshenziswa ibha indle endaweni yokuhlala hhayi eseyintsha. Ukuba khona ifenisha ezinjalo endlini yakhe manje akumangalisi. Practice Love for ekhishini ingasetshenziswa inhloso yazo lapho izivakashi zifika. Kungaba ikhonze njengomPristi itafula elincane lapho ungaba sasekuseni ngokushesha. Kulesi sihloko, sizokubonisa umehluko phakathi ibha sezinyawo ekhishini kusuka indle ejwayelekile.
Zonke namuhla ibha izigqiki ekhona for ekhishini, isithombe okuyinto ungabuka ngezansi, zihlukaniswe ikakhulu zibe izinhlobo ezintathu. Hlukanisa izinhlobo evamile, izigqiki, kanye nengxenye-kwesitulo. Futhi konke lokhu okuhlobana ngayo izihlalo ibha counter. Uhlobo lokuqala kuyinto esihlalweni okusezingeni eliphezulu ngonyawo kwamasabatha. Ngokuqondene okufana yesibili, libhekene poluspinki khona ngoba, okwandisa induduzo umuntu owayehlezi. Esesithathu ibha sezinyawo ekhishini kubuye encane emuva, kodwa ngokungafani samuntu owedlule, it uqhosha kokuba yokubeka ekhethekile.
Traditional ibha sezinyawo ekhishini has a isakhiwo sasivumela bakudala, okubandakanya uhlaka ehlanganisa izinyathelo nokusekelwa, nesihlalo langempela. Isibalo imilenze kungase kube onhlobonhlobo. Konke kuncike izifiso yekhasimende. Sales kukhona ngisho izihlalo ngemlente munye, kodwa iningi le ifenisha ifakwe emibili, emithathu nenye ezine imilenze. Kwamanye tinkhulumo, umenzi sihlinzekela ukulungiswa yokuphakama kwabo, okuyinto efana ehhovisi izihlalo.
Isibaluli eyinhloko ngayinye sezinyawo - a footrest. Ngaphandle ayenzi iyiphi sezinyawo Ibha ekhishini. Le ilungu kwesakhiwo evumela umuntu ukuba agqoke kwezinyawo zakhe. Iqiniso lokuthi kwesihlalo ibha ezakhiweni zabo impela high zihlalo isikhundla. Ngakho nje ahlale kuso, imilenze yakhe ensimbi alenga phansi, hhayi elula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-footrest ezifana izenzo njengenhlangano usekelo olungeziwe ngamunye.
Kuleli qophelo embhalweni esihlalweni izihlalo kungaba yinto ehlukile. Ngesimo bangaba nobuhlobo naye babe okusaqanda, isikwele noma unxande. Futhi, zikhona izihlalo amafomu nezimo okungavamile. Kuye design, bangakwazi rotated emhlabeni axis awo. Njengoba isikhumba, abakhiqizi avame ukusetshenziswa lapha esikhumbeni esithambile noma zokwenziwa Indwangu nge yamathebhu (ezifana indwangu uwoyela noma indwangu eliqinile le). Kunoma ikuphi, ezihlukahlukene okunjalo izinto ikuvumela ukuthi ukhethe othile ingaphakathi ukhonkolo ibha indle for ekhishini. Intengo imikhiqizo efana lutholakala kalula kunoma ubani nesithakazelo, ukuze bakwazi ukuthenga ngokuphelele yisiphi isitolo noma nge-Internet.
Futhi ekugcineni Ngithanda ukusho ukuthi manje amamodeli samanje ibha izigqiki kungaba hhayi kuphela ifomu evamile. Basuke eliqoshiwe ezinsukwini ubudala, kanye nezixazululo yasekuqaleni kakhulu ingasetshenziswa njengoba izinto zokuhlobisa. Ngakho-ke, kwesihlalo Ibha ekhishini, kuncike design ongaphumelela umphelelisi ingaphakathi classical, noma, Ngakolunye uhlangothi, zobuchwepheshe isitayela.
Izinhlobo umnyango lomnyango. iluphu Okuza nezici zabo
Kuzamazamisa Wezingane for fun game
Iyogathi ice cream: Ungadliwa ozithandayo uswidi
Umbadlana MSI 990FXA-GD65: Izici kanye nokubuyekeza
Montenegro, Budva: zokudlela ukuthi bayakufanelekela ababevakashile. Izithombe kanye nokubuyekeza